MVP-502 MVP-502 Yakagara pawiricheya - 36 lbs Wiricheya w / Headrest
Aluminium Ultra Yakareruka MVP-502 Yakatsenhama Wiricheya
Iyo Karman MVP-502-MS Yakagadzika Sachigaro yakagadzirirwa neakawandisa mushandisi nyaradzo mupfungwa. Patent Ergonomic / Anti-Sliding "V-Kugara" inodzivirira kutsvedza, maronda uye kubvisa kwese kumanikidza pamuviri. Backrest inogara zvakanaka kubva kuma 93-160 degrees. YAKADZIDZISWA NENYENZO 4.7 PASI WHEELCHAIR INSTITUTE
Ergonomic Armrest inobvumira mushandisi kugadzirisa armrest nzvimbo kana akatsenhama. Gumbo rinobvisika rinosimudza peta mukati kana kunze.
The Karman MVP-502 Yakadzikama Wiricheya inodhura kune chigaro chemanyorerwo, asi hunhu hwacho hunoshamisa, uye nyaradzo uye huwandu hwakawanda hwesarudzo dzekugadzirisa zvinoita kuti zviome kuramba. Nekuda kwemutengo wayo wepamusoro, uyu wakagadzirirwa chaizvo vanhu vane nyaya dzekufamba kwenguva refu.
Iwe unotambura kubva kune yakareba-nguva yekufamba nyaya? Iwe unofanirwa kupedza maawa akati wandei ezuva nezuva muwiricheya yako? Kana iwe ukapindura hongu kune mumwe kana kuti yese yemibvunzo iyoyo, saka iwe ungangodaro wakamhanya uchinetseka pamusoro pechinetso chikuru nemawheelchair mazhinji nhasi. Ivo havangori vakasununguka, kunyanya kana uchifanira kugara mavari kwenguva yakareba yenguva.
Kunyange chiri chokwadi kuti iwe unogona kuita chero chero chewiricheya kunyatsogadzikana pamwe nekuwedzeredzwa kwakaringana mapiro kana mabhureki emaketuru, hazvingave zvakanaka here kana kambani ikapa wiricheya yaive yakanyatsogadzikana kunze kwegedhi, pasina shanduko inodiwa?
Zvinoitika, kambani yaita izvo chaizvo, uye mhedzisiro yacho inoshamisa. Kana kunyaradzwa uye kuita zvinhu zvakasiyana-siyana zviri zvakakosha zvako, saka Karman MVP502 ndiyo chigaro chaunoda. Ndiyo imwe yemawiricheya anodhura emawoko aunogona kutenga, asi sezvauchaona muzvikamu zvinotevera, imhaka yekuti inogona kuita chero chinhu uye zvinoshamisa kugadzikana.
Chikonzero chikuru chaunogona kukwevera kuchigaro ichi pamusoro peimwe modhi inyaya yekuti inogara. Muchokwadi, iyo yakanyanya kutsamira angle inoyevedza 125 madhigirii kuti iwe ugone kunyatsogadzikana kana uchifanira kugara mairi kwenguva yakareba. Izvo zvinotokwanisika kutora zvine mutsindo naps mairi, iri kukunda kukuru kune vanhu vane yakareba-kwenguva nyaya dzekufamba uye anogona kunetseka kubva pachigaro kuenda pamubhedha pasina rubatsiro.
Sekukura kwakaita basa rekutsenhama, zvakadaro, ingori chidimbu cheaizi yechando uko sarudzo dzekugadzirisa sachigaro idzi dzine chekuita. Iwe unowana tambo dzemakakatanwa mune zvese zvigaro pachayo uye neshure kwayo, zvichireva kuti ese ari maviri anogona kugadziridzwa kuti awedzere nyaradzo yako.
Iwo mawrestrests zvakare akakwirira kuchinjika, sezvakaita iwo gumbo rinozorora, iyo zvakare inotenderera munzira, ichibvumira munhu anoshandisa chigaro kuti aswedere padyo padyo netafura yekudya kwemanheru, uye vanogona kukurumidza kubviswa kana iwe uchida kudonhedza chigaro chekufambisa.
hapana 16 ″ x16 ″ 18 ″ x18 ″ 20 ″ x18 ″ (+ $ 288.00)
hapana 16 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”Cushion (+ $ 219.00)	18 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”Cushion (+ $ 219.00)	20 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”Cushion (+ $ 229.00)	16 ″ x16 ″ Chigaro Furo 2 ″ Yako (+ $ 72.00)	18 ″ x16 ″ Chigaro Furo 2 ″ Yako (+ $ 72.00)	20 ″ x16 ″ Chigaro Furo 2 ″ Yako (+ $ 78.00)	16 ″ x16 ″ Chigaro Gel 2 ″ Cushion (+ $ 98.00)	18 ″ x16 ″ Chigaro Gel 2 ″ Cushion (+ $ 98.00)	20 ″ x16 ″ Chigaro Gel 2 ″ Cushion (+ $ 108.00)
hapana 16 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Cushion (+ $ 189.00)	18 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Cushion (+ $ 189.00)	20 "Wide Yekuyeuka Furo 2 ″ Kushi (+ $ 199.00)	16 "Wide Back Foam Cushion (+ $ 98.00)	18 "Wide Back Foam Cushion (+ $ 98.00)	20 "Wide Back Foam Cushion (+ $ 108.00)
MVP-502 - 36 lbs huwandu
SKU: MVP502-MS Categories: Ergonomic Wiricheya, Karma Mawiricheya, Kudzokorora Mawiricheya, Tilt mu Space Wiricheya Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Makakatanwa Strap Adjustable Seat & Backrest
Kureba Anogadziriswa Arms
Yakakwirira Simba Ndege Giredhi Aluminium, inorema chete 33 lbs. (w / o zvigaro zvetsoka)
Yakagadziriswa "V" Shape Seating (anti-thrust, kutsvedza)
"Tube-in Center" tsoka
Available in Transport 14 - mavhiri kana 22 - Rear mavhiri
Kupeta / Ultra Compact
Aegis Anti-Bhakitiriya Upholstery
Flat isina polyurethane matai
HCPCS Kodhi K0003, E1226, E0971, K0108, E0973, E0990, E0955*
Kunopindirana Kureba 52 padiki.
Pakazara Hupamhi Hupamhi 24 padiki., 26 padiki., 28 padiki.
Hwakapetwa Hupamhi 14 padiki., 15 padiki., 16 padiki.
MVP-502 Yakatsenhama wiricheya UPC #
38 × 16 × 37 mukati